Qiimaha Apple wuxuu gaari doonaa laba tiriliyan oo doolar sanadka 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Qiimaha Apple wuxuu gaari doonaa laba tiriliyan oo dollar 2021
Falanqeeye maaliyadeed ayaa hadda ku dhawaaqay inay u badan tahay in qiimaha shirkadda Apple ay gaari doonto markii ugu horreysay taariikhdeeda shirkadda laba tirilyan oo doolar sanadka soo socda. Sidaa darteed waxay noqoneysaa shirkaddii ugu horreysay ee xaddigan gaadha.
Haddii aan xisaabta ku darsanno in xilligan qiimihiisu ku dhow yahay Bilyan 1,7, iyadoo lixda bilood ee ugu horeysa sanadkaan ay masiibo ku habsatay shirkada cudurka faafa ee coronavirus, layaab malahan inay wax hagaagayaan oo mar uun sanadka 2021 qiimihiisu uu gaarayo tiradaas, horeyba waxaa ula socday Apple Silicon iyo IPhone 5G dukaamada.
Falanqeeyaha dhaqaalaha Dan Ives Qoraalkiisii ​​ugu dambeeyay ee uu la wadaago saamileyda Apple, wuxuu saadaalinayaa in mar uun 2021 ay Apple noqon doonto shirkaddii ugu horreysay adduunka ee yeelata qiime dhan 2 trillion dollars.
Ives, oo ka mid ah maal-gashadayaasha Apple ee aadka u xoog badan, ayaa rumeysan dardargelinta mashruucan Silicon Apple iyo adeegyada 5G Apple waxay awood u leedahay inay dhaafto $ 2 trillion oo suuq geyn ah sanad gudihiis.
Ives wuxuu qoray in qiimeynta $ 2 trillion ee Apple ay ku xirnaan doonto qeyb ahaan Shiinaha. Waxa uu sheegay in waddankani uu weli yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah habka loo yaqaan 'Apple' ee loogu talagalay guusha, isaga oo qiyaasaya in qiyaastii 20% cusbooneysiinta iPhones cusub ayaa ka imaan doona gobolkan sanadka soo socda.
Kaliya Shiinaha, inta udhaxeysa 60 iyo 70 milyan IPhone-ku waxay ku jiraan daaqada fursada casriyaynta inta lagu jiro 2021, iyadoo Apple ay si xawli ah u socoto dhamaan qiimaha (iPhone SE, iPhone 12) si loo xoojiyo saldhigeeda la rakibay inkasta oo ay jiraan culeysyo dhanka tartamada ah oo ka imanaya soo saarayaasha Shiinaha.
Dan Ives ayaa sidoo kale soo jeediyay in Fayruuska corona ayaa iftiimiyey awooda iyo kartida ganacsiga adeegyada Apple. In kasta oo shirkadaha kale si ba'an loo garaacay, haddana awoodda Apple ee "si aan kala sooc lahayn" u iibinaysa adeegyada rukhsadda iyo codsiyada ayaa sii wadi doonta inay qanciso maalgashadayaasha.
Meel kale, warbixintu waxay xaqiijineysaa warar xan ah oo sheegaya in Apple ay soo saari doonto afar nooc oo iPhone 12 ah dabayaaqada sanadkan. Waxay sidoo kale soo jeedineysaa, iyada oo laga taageeray warbixinnadii hore, in Apple aysan ku bixin doonin dhagaha dhagaha ama fiilada xarkaha sanduuqa iPhone 12. Tani waxay u badan tahay inay kordhin doonto baahida loo qabo AirPods. Waxaan ula jeedaa, biil badan.
Qiimaha tufaax qaniinay
Haddii Apple uu noqdo shirkaddii ugu horreysay ee si rasmi ah looga ganacsado taariikhda si ay u gaarto qiimeynta $ 2 trillion, dhab ahaan ma noqon doonto wax lala yaabo. Ahaa shirkadda ugu horreysa dadweynaha taariikhda si ay u gaaraan qiimeynta $ 700 bilyan, $ 800 bilyan, $ 900 bilyan iyo $ 1 tiriliyan. Bil ka hor, waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee Mareykan ah ee lagu qiimeeyo in ka badan $ 1,5 trillion.
Sannadkan waxay horeyba uga soo kabatay dhammaan khasaarihii ay heshay cudurka faafa ee COVID-19, wayna sii kordheysaa. Xilliga dayrta waxaan haysannaa kan ugu horreeya iPhone 5G, oo ay u badan tahay inaan mar hore arki doonno Mac-yada ugu horreeya ee Silicon Apple. Muuqaalkaan, tufaaxu wuxuu kusii socon doonaa inuu qiimahiisa sare ugu kaco, hubaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Qiimaha Apple wuxuu gaari doonaa laba tiriliyan oo dollar 2021
Apple waxay sanadkan maalgashi ku samayn doontaa 400 milyan oo doolar barnaamijkeeda guryaha la awoodi karo ee California
Apple waxay rajeyneysaa 20% kordhinta shixnadaha ee MacBook Pro rubuca saddexaad